होस गर्नुस् है ! चैतदेखि यस्ता गाडी गुडाए सरकारले ‘सीज’ गरेर लिलामी गरिदेला « Clickmandu
होस गर्नुस् है ! चैतदेखि यस्ता गाडी गुडाए सरकारले ‘सीज’ गरेर लिलामी गरिदेला
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायात आगामी चैत १ गतेपछि पनि गुडेमा ‘सीज’ गरी लिलाम गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सवारी सडकमा गुडे ‘सीज’ गरी सरकारले लिलाम गर्छ, यसैले फागुन मसान्तसम्म पुराना सवारी व्यवस्थापनको सबै काम सक्न व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ, भट्टराईले भने ।
देशभर गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटनामा समेत बढ्न थालेपछि चैतदेखि हटाउने निर्णय गरिएको विभागको भनाइ छ । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ संशोधन गरी चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन लागेको छ । विभागले गत वर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो ।
उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन गरेको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदूषण बढेको यातायात क्षेत्रको विकृतिका विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरिरहनुभएका रामबहादुर थापाले सुनाए ।
विभागका महानिर्देशक भट्टराई पनि २०७३ फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन गरेको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
विभागले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी र विद्युतीय सवारी साधन भने गुड्न दिइने जनाएको छ । विद्युतीय टेम्पो हाल उपत्यकामा ६ सय र उपत्यका बाहिर २ सय छन् । ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधन भने ३० वर्षसम्म चल्नसक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरी गत असोजमै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।
हाल देशभर २० वर्ष पुराना सवारी साधन पाँच हजार ५ सय गुडिरहेको विभागले जनाएको छ । रासस
हाइड्रोको हकप्रदमा नियमन आयोग उदार, आयोजना निर्माण पुरा नभएका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्न पाउने
काठमाडौं । लगातार घटिरहेको सेयर बजार सोमबार पनि निरन्तता पाएको छ । गत बिहीबार २८१९